Umtiti oo ka hadlay heshiiska la filayo in Griezmann uu ugu dhaqaaqo kooxda Barcelona – Gool FM
epa07001773 French players Antoine Griezmann (R) and Samuel Umtiti (L) warm up prior to the UEFA Nations League soccer match between Germany and France in Munich, Germany, 06 September 2018. EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
(Spain) 25 Maarso 2019. Daafaca kooxda Barcelona Samuel Umtiti ayaa muujiyay dareenkiisa kaga aadan heshiiska la filayo inuu ugu dhaqaaqo xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Antoine Griezmann garoonka Cump Nou.
Waxaa jirtay xiliyadii lasoo dhaafay warbixino dhoowr ah ee ku aadan in Antoine Griezmann uu ka tagayo caasimadda Spain ee Madrid si uu ugu biiro Barcelona, kadib markii ay isaga hareen tartanka xiisaha badan ee Champions League.
Hadba Samuel Umtiti oo arintan ka hadlayay ayaa sheegay:
“Miyaan ku faraxsanaan lahaa hadii ay ii sheegeen in Griezmann uu ku biirayo kooxda Barcelona?… dabcan Haa”.
“Miyuu ku haboon yahay imaatinka halkan?” Haa”.
“Miyaad la hadashay isaga? maya, dhab ahaantii”.
“Waan ogahay inuu aad ugu faraxsan yahay kooxda Atletico Madrid, wax walba waxay ugu socdaan sida ugu fiican”.
“Xirfadeena waa inaan gaarin go’aan aan ka qoomameyn doono xili dambe, wuu ku faraxsan yahay halka uu joogo, inkasta uu awood u leeyahay inuu u ciyaaro koox kasta ee aduunka ah, hadana waxa ugu muhiimsan ayaa ah inuu faraxsanaado”.
Ka Bogo Magacyada 24-ka Waddan ee u soo baxay tartanka Qarammada Afrika sanadkaan ee Africa Cup of Nations 2019